Inona no dikan'ny hoe 'Extra' amin'ny fiteny slang - Teknolojia
#actagainstabuse Mpinamana Sy Fianakaviana Lakozia Maharitra Fanamarihana Momba Ny Sarimihetsika Hafa Lamaody Mpanambady Amboary Eo Noho Eo Fitness Gynaec Ahoana No
Amin'ny fleek, cray, turnt : Mirona mirehitra vetivety ny slang amin'ny Internet, avy eo manjavona raha vao tafiditra ao anaty tambajotra sosialy an'ny olon-drehetra ao anatin'izany ny Nenitoa Linda anao. Saingy ny teny iray dia toa manana fahefana mijanona amin'izao fotoana izao, noho izany dia nieritreritra izahay fa hampiditra olom-baovao ary hanome ny teny manodidina. Mihaona fanampiny.
sarimihetsika mampihetsi-po tsara indrindra amin'ny Amazon amazon
Inona no dikan'izany? Ny extra dia faritan'ny manam-pahaizana hatramin'izay UrbanDictionary.com toy ny fihetsika tafahoatra sy manaitra; manao ny tanteraka indrindra. Amin'ny ankapobeny, raha mangataka fanintelony ny nenitoanao Linda hoe maninona ianao no mbola mpitovo ary avy eo manambara hoe, Iza aho no hitsara? mafy be mba ho ren'ny rehetra eo amin'ny latabatra fisakafoanana, izy dia FANALAVAM .
Ahoana ny fomba fampiasako azy amin'ny fehezanteny? Voamarikao ve fa isaky ny mandeha misakafo antoandro isika dia manontany i Karen hoe inona no anaovan'ny olona rehetra ary avy eo miseho amin'ny voditongotra sy akanjo tery ihany? Afaka izany izy FANALAVAM .
Avy aiza izy io? Ny teny hoe extra dia niova avy amin'ny fametahana pizza an'i Domino ho lasa trope Internet be mpampiasa tamin'ny alàlan'ny meme antsoina hoe Salt Bae , lehilahy fanta-daza amin'ny filalaony manaitaitra amin'ny fikosehana steak steak.
Lahatsoratra iray nozarain'i Vogue (@voguemagazine) amin'ny 4 Mey 2017 amin'ny 7:19 maraina PDT
Inona no tokony hataoko raha misy miantso ahy fanampiny? Henoy: Tsy voatery ho zavatra ratsy izany. Ka ahoana raha tara amin'ny sakafo hariva fitsingerenan'ny andro nahaterahan'i BFF ianao satria sahirana loatra tamin'ny famoahana horonantsary Celine Dion sy GIF avy tao amin'ny Met Gala? Tsy misy mahamenatra ny mihoampampana amin'ny fijerinao ny extraness an'i Celine. Ny tantara an-tsehatra kely dia tsara ho an'ny fanahy.
Mifandraika: Ny dikan'ny litera indray mandeha sy ho an'ny rehetra
Sokajy Lamaody Mpanambady Fitaizana Fironana
kilalao fety ho an'ny olon-dehibe
tantaram-pitiavana vao haingana sarimihetsika Hollywood
hairdos ho an'ny volo olioly
andro nisokafan'ny sekoly Quotes
sarimihetsika fitsangantsanganana tsara indrindra